नेपालको सगरमाथामा नेपाली सर्भेयर नै पहिलो पाइला पर्न सफल भएः गौतम-Goodnews24 – Good News24
Home/सफल कथा/नेपालको सगरमाथामा नेपाली सर्भेयर नै पहिलो पाइला पर्न सफल भएः गौतम-Goodnews24
नेपालको सगरमाथामा नेपाली सर्भेयर नै पहिलो पाइला पर्न सफल भएः गौतम-Goodnews24
पोखरा, ७ पुस- नेपाली र विदेशी सञ्चार माध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको वैज्ञानिक तवरबाट नयाँ उचाइको घोषणा भएको थियो । नेपाल सरकारले पहिलोपटक आफ्नै स्रोत साधन र नेपाली प्राविधिक जनशक्तिबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो । हामीले मान्दै आएको सगरमाथाको उचाइ आठ हजार ८४८ मिटर यसअघि विदेशीले मापन गरेका थिए । हिमाल चढ्नु आफैँमा कठिन कार्य, त्यसमाथि सगरमाथाको उचाइलाई मापन गर्नु झन् ठूलो चुनौती र जिम्मेवारी हो । सगरमाथाको उचाइ मापन टोलीको नेतृत्व गर्नुभएका कास्की, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका (साविक धिताल गाविस) निवासी ३७ वर्षीय खिमलाल गौतम, जो हाल नापी विभागका कास्कीका प्रमुख हुनुहुन्छ, को संयोजकत्वको टोलीले पाएको सफलतासँगै चीन र नेपाल सरकारले सगरमाथाको उचाइ ८६ सेन्टिमिटरले बढेर ८,८४८.८६ मिटर पुगेको औपचारिक घोषणा गरे । कर्ममा विश्वास गर्ने र संसारमा असम्भव केही हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्न रुचाउने नापी विभागका उपसचिव(हाल चिफ सर्भे अफिसर, पोखरा) गौतमसँग रासस पोखरा प्रतिनिधि जमुनावर्षा शर्माले सगरमाथा मापनको अनुभवमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीः
राससः एउटा गर्विलो र ऐतिहासिक काम यहाँको संयोजकत्वमा सम्पन्न भयो, सगरमाथा मापनको त्यो क्षण कसरी सम्झनुहुन्छ ?
राससः एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी काँधमा बोकेर सगरमाथाको बेसक्याम्प पुग्दाको पहिलो दिनको अनुभव कस्तो रह्यो ?
गौतमः हामी मिति २०७५ चैत २७ गतेका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको शुभकामना बोकेर सगरमाथातर्फ लाग्दै गर्दा २०७६ साल वैशाख १० गते (पासाङल्हामु शेर्पा चढेको दिन) सगरमाथाको आधार शिविरमा पुगेका थियौंँ । पहिलो दिन जब आधारशिविरमा टेकँे, तब मैले पहिलाभन्दा अलि भिन्न महसुस गरँे । मैले यसभन्दा अगाडि पनि पटकौंँपटक आधारशिविरमा आएर कयाँैं रात बिताइसकेको थिएँ तर यसपालि पुग्दा अलि अर्कै महसुस भयो । मेरो टोलीका चार सदस्यमध्ये दुई जना मात्रै १० गते आधार शिविर पुग्न सकेका थियौंँ, रवीनजीको स्वास्थ्यमा केही गडबड भएकाले त्यो दिन उनी पुग्न सकेनन् र तल लोबुचेमा नै एक जना साथी सुरजसिंह भण्डारीलाई साथी छाडेर युवराजलाई लिएर म त्यहाँ पुगेको थिएँ । । म अगाडि गएर समग्र व्यवस्थापनको विषयवस्तु बुझ्नुपर्ने र नपुगेको कुरा मिलाउनुपर्नेसमेत मेरो जिम्मेवारी भएको हुँदा बिरामी साथीलाई तलै छाडेर म अगाडि लागेको थिएँ ।
राससः वैज्ञानिक मापन भनिएको छ, सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा मापन विधिका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?
राससः सगरमाथाको चुचुरामा कति समय बस्नुभयो, चुनौती के के थिए ?
गौतमः समग्र यो काम एक चुनौती नै चुनौतीले जेलिएको काम थियो । हामी लगभग दुई घण्टा जति चुचुरामा बस्यौंँ । चुनौतीलाई सामना गर्ने लक्ष्यका साथ बसेको कारणले सबै चुनौती याद छैनन्, तथापि हामीलाई लगभग माइनस ४३ डिग्री तापक्रमको त्यो कष्टकर समयमा, अन्धकारमय हुंँदै चुचुरामा यन्त्र, उपकरण सेटअप गर्न सफल भयौंँ । हाम्रा यन्त्र, उपकरण निकै महँगा र संवेदनशील थिए । पातलो पञ्जा लगाएर या खाली हातमा काम गर्नुपर्ने भएकाले निकै चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमा पनि चुचुरामा सामान्यतया १०÷१५ मिनेट मात्र रहन सक्छन् साधारण आरोहीहरू, तर हामीलाई छोटो समय बस्ने छुट थिएन, किनकि छोटो समयको डाटाले हाम्रो नापी विभागको शुद्धतालाई समेट्न सकिँदैनथ्यो, त्यसकारण पनि लामो समय बसेर लामो अवधिको तथ्याङ्क लिन सक्नु अर्को चुनौतीपूर्ण थियो । अनौपचारिक तवरबाट बुझ्दा चिनियाँहरूको समिट अब्जरभेशनको समयावधिभन्दा हाम्रो समयावधि धेरै थियो भन्ने बुझिन आएको छ । उचाइ मापनका लागि जति धेरै अवधिको तथ्याङ्क लिन सकियो, त्यति नै शुद्ध उचाइ गणना गर्न सकिने भएकाले नापी विभागले धेरै परिशुद्ध उचाइ मापन गरेको छ भन्न हामी सक्छौंँ । चुचुरामा धेरै समय बिताउँदा मेरो खुट्टाको एउटा औँला नै हिउँले खाएको थियो । फेरि पनि त्यो ऐतिहासिक कार्यको मैदानमा अरु कुरा गौण बने ।
राससः मापनका लागि प्रयोग गरिएका उपकरणबाट कुनै समस्या त भएन ?
राससः सगरमाथाको उचाइ हिउँसहित नापिएको हो कि हिउँविना ?
गौतमः स्थायी हिउँले ढाकिएको एक पहाडको चुलीलाई हिमाल भनिन्छ । अर्थात् सबै हिमालहरु पहाडहरु हुन् तर सबै पहाडहरु हिमाल हैनन् । हाल सगरमाथाको उचाइ भनेको स्थायी हिउँसहितको नाप हो । यसर्थ हिमालको परिभाषाबाट पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ कि हिमालको उचाइ भन्नु स्थायी हिउंँ सतहसहितको उचाइ नै हो।
राससः यसभन्दा पहिला नाप्दा आठ हजार ८५० आयो रे भन्न कुरा आएको थियो ?
राससः गोरखा भूकम्पका क्रममा इण्डियन प्लेटले तिब्बतियन प्लेटलाई धकेलेपछि उचाइ बढेको हो त ?
राससः चीन र नेपालको मापन गर्ने तरीका एउटै थियो त ?
राससः दुई देशका प्राविधिकबीच कत्तिको सम्पर्क र समन्वय भयो ?
राससः यहाँ पहिलोचोटि भ्रमण वर्ष २०११ को पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सगरमाथा चढ््नुभयो, दोस्रो चोटि उचाइ नाप्ने कार्यदलको संयोजकका रुपमा सगरमाथा पुग्नुभयो, यो दुई अवसरलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
राससः अहिलेको मापनचाहिँ पहिलेभन्दा आधिकारिक मानिने कारण ?
राससः यहाँ अध्यात्मप्रति पनि उत्तिकै रूचि राख्नुहुन्छ र अध्ययन पनि गर्नुहुन्छ । हिमाललाई देवात्मा पनि भनिन्छ, किन ?
राससः जिम्मेवारी पूरा गरेर अवतरण गरेको पलमा यहाँले विशेष के कुरालाई स्मरण गर्नुभयो ?
राससः सगरमाथाको विस्तृत अध्ययनसहित उचाइ मापनको अनुभवका बारे यहाँले लेख्दै गरेको पुस्तक पाठकले कहिले पढ्न पाउँछन् ?
राससः सगरमाथा मापन आरोहणका क्रममा बाटामा शवहरु पनि देख्नुभयो ? फोहरको कुरा पनि निकै उठ्ने गर्छ, कस्तो पाउनुभयो ?
राससः यो महत्वपूर्ण कार्यसम्पादनमा यहाँको पछाडि रहेर पनि धेरे योगदान गर्नेहरु होलान्, उहाँहरुलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
गौतमः यो वास्तवमै सामूहिक काम हो । विशेषतः यो नेपाल सरकारको काम हो, नेपालको आधिकारिक नापनक्शा गर्ने निकाय नापी विभाग भएकाले समग्र नेतृत्व विभागले गरेको हो । यसमा हाम्रा आदरणीय महानिर्देशक प्रकाश जोशी, सगरमाथा उचाइ मापनको समग्रतामा हेर्ने उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोल, निर्देशक दामोदर ढकाल, तथ्याङ्क प्रशोधनमा दिनरात नभनी खटिएका नापी अधिकृतहरू सुरजबहादुर केसी, महेश थापा, विज्ञान बञ्जारा, शङ्कर केसी, स्टालिन भण्डारीलगायतका सबैसबैको विशिष्ट योगदानविना यो कार्य हुन निकै गाह्रो थियो । यसको शुरुआत गर्ने बेलामा विशिष्ट योगदान गर्ने महानिर्देशकमध्ये गणेशप्रसाद भट्टको नाम नलिँदा पनि यो अपूरो हुन्छ । नापी विभागका विभिन्न तह र तप्कामा रही फिल्डमा डटेर लागेका सर्भेयरहरूको समेत महत्वपूर्ण योगदान बिर्सन हुंँदैन जस्तो लाग्छ । यसमा मन्त्रालयबाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने, आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने सहसचिव जनकराज जोशीसरको समेत विशिष्ट योगदान रहेको छ । अन्तर्वार्ता, नेपालको सगरमाथामा नेपाली सर्भेयर नै पहिलो पाइला पर्न सफल भएः गौतम
नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको वैज्ञानिक तवरबाट नयाँ उचाइको घोषणा भएको थियो । नेपाल सरकारले पहिलोपटक आफ्नै स्रोत साधन र नेपाली प्राविधिक जनशक्तिबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो । हामीले मान्दै आएको सगरमाथाको उचाइ आठ हजार ८४८ मिटर यसअघि विदेशीले मापन गरेका थिए । हिमाल चढ्नु आफैँमा कठिन कार्य, त्यसमाथि सगरमाथाको उचाइलाई मापन गर्नु झन् ठूलो चुनौती र जिम्मेवारी हो । सगरमाथाको उचाइ मापन टोलीको नेतृत्व गर्नुभएका कास्की, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका (साविक धिताल गाविस) निवासी ३७ वर्षीय खिमलाल गौतम, जो हाल नापी विभागका कास्कीका प्रमुख हुनुहुन्छ, को संयोजकत्वको टोलीले पाएको सफलतासँगै चीन र नेपाल सरकारले सगरमाथाको उचाइ ८६ सेन्टिमिटरले बढेर ८,८४८.८६ मिटर पुगेको औपचारिक घोषणा गरे । कर्ममा विश्वास गर्ने र संसारमा असम्भव केही हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्न रुचाउने नापी विभागका उपसचिव(हाल चिफ सर्भे अफिसर, पोखरा) गौतमसँग रासस पोखरा प्रतिनिधि जमुनावर्षा शर्माले सगरमाथा मापनको अनुभवमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीः
फुटसल बुधबार देखि सञ्चालनमा-Goodnews24